Laptọọpụ maka ụmụaka, kedu ihe dị mma maka ọrụ ụlọ ma ọ bụ ịmalite?
Mgbe a mụrụ ohu, ndị okenye kwuru na nwatakịrị ji ogbe achịcha n’okpuru ogwe aka ya na-abịa. N'oge a, ọ bụrụ na ha nwere ihe n'okpuru ogwe aka ha, ọ bụ mbadamba nkume ma ọ bụ smartphone. N'ihi na ihe karịrị afọ iri, ozugbo a mụrụ ha, ụmụaka na-ama na-emetụ dijitalụ ngwaọrụ, n'ihi ya, ha na-ebi na-amụta n'ụzọ dị nnọọ iche karịa ndị anyị bụ ndị ugbu a a afọ ole na ole mere. Nkà na ụzụ nwere ike inyere ha aka ịmụta na n'isiokwu a anyị ga-ekwu maka ya ụmụaka laptọọpụ, ụfọdụ ndị a haziri ahazi maka ha.
1 Laptọọpụ kacha mma maka ụmụaka
2 Ihe kpatara ịzụta laptọọpụ maka nwatakịrị
3 Kedu ka laptọọpụ ụmụaka kwesịrị ịdị
3.1 Anwụ ngwa ngwa
3.3 Njikwa nne na nna
3.4 Nka nka na ụzụ
3.5 Usoro njikwa
4 Uru nke ịzụrụ nwa gị laptọọpụ
4.1 Mee oru omume
4.2 Mụta n'ịntanetị
4.3 Bido na kọmpụta
5 Kedu afọ ọ dị mma ịzụta laptọọpụ ụmụaka?
6 Mbadamba ụrọ ma ọ bụ laptọọpụ maka nwatakịrị?
Laptọọpụ kacha mma maka ụmụaka
Ihe kpatara ịzụta laptọọpụ maka nwatakịrị
Ihe kpatara ịzụrụ laptọọpụ maka nwatakịrị dị ole na ole, ma dị mkpa. E mesịa, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu ụfọdụ n'ime otu ha nwere ike isi rụọ ọrụ ụlọ ha, mụta ihe n'ịntanetị, nke gụnyere ịgagharị na netwọkụ, na malite na kọmputa, ma e nwere nkọwa zuru ezu iji tụlee: ha ga-eme ihe niile dị n'elu na ngwaọrụ ha, nke ha ga-eche dị ka nke ha na nke ha ga-amụtakwa ilekọta ihe.
Ọzọkwa, ọ dịghị ihe dị mkpa bụ na, mgbe ị na-eji nke gị, ọ gaghị adabere na nke anyị. Ọ bụrụ na n'oge ọrịa na-efe efe, ha ga-eme ihe site n'ụlọ, ha nwere ike ime ya n'oge ọ bụla na n'ime ụlọ ọ bụla n'ime ụlọ na-ejighị laptọọpụ anyị. Ha agaghị enye nsogbu ma ọ bụ kpasasịa, nke a dịkwa anyị mkpa, karịsịa n'oge nsogbu dị ka ndị na-amanye anyị ịnọ n'ụlọ.
Kedu ka laptọọpụ ụmụaka kwesịrị ịdị
Ndị okenye, ndị na-egwu egwuregwu n'akụkụ na maka ihe ndị ọzọ, mara ka esi emeso laptọọpụ. Anyị maara na a na-emepụta ngwa teknụzụ ka ejiri ike mee ihe, anyị ekwesịghị "ịkụ" ha ma anyị na-achịkwa onwe anyị n'ozuzu. Ụmụaka abụghị otu, ha na-akpachapụ anya karị na, ma eleghị anya dị ka ndị na-egwu egwuregwu, ha nwere ike inye ngwá ọrụ ahụ ịma jijiji nke nwere ike imebi ya, ya mere, a ghaghị ime ka laptọọpụ ụmụaka dị na ya. na-eguzogide ọgwụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị na mbụ, ọ bụghị echiche dị njọ ilele ma laptọọpụ na-ejide unyi nke ọma, ma ọ bụ karịa kpọmkwem iru mmiri. Ọ na-adakwasị anyị ndị okenye (ndị na-ajụ enyi), ma o yikarịrị ka ụmụaka na-aṅụ Colacao mgbe ha na kọmputa na-agbasa ihe niile. Ma n'ozuzu, na kọmputa ụmụaka, nguzogide dị mkpa karịa nhazi dị mma.
Ọnụ ego nke laptọọpụ ụmụaka ga-adabere n'iji ya eme ihe, nke a bụkwa ihe na-emetụtakwa ndị okenye. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na anyị ga-azụta laptọọpụ maka ntakịrị ma anyị nwere otu n'ime laptọọpụ n'isiokwu a n'uche, anyị anaghị eche maka kọmputa nkịtị ma ọ bụ okenye, ya mere. ọnụahịa ga-adị ntakịrị.
Ego ole ka ọ ga-eri obere? O siri ike ịmata. Ọ bụrụ na anyị na-ahọrọ nke na-eje ozi iji rụzuo ndị kasị isi ọrụ, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ na a ọnụ ahịa dị ntakịrị karịa € 200, ma ọ bụrụ na anyị na-eche na ha chọrọ ihe ọzọ, anyị na-ahụ na onye nta nwere ikike ma ọ bụ na anyị chọrọ nnọọ ihe nwere ike ime ihe niile, e nwekwara ụfọdụ ndị nwere ike ịbụ n'elu € 600, ọ bụ ezie na anyị na-eleghị anya na-ekwu okwu banyere a nkịtị laptọọpụ, ọ bụghị. maka ụmụaka .
Nke a bụ isi ihe dị mkpa. Ihe niile dị na ịntanetị, nke ahụ pụtara na anyị nwere ike ịchọta ihe ọma na ihe ọjọọ. Anyị ndị okenye maara ihe anyị ga-eme ihe ọ bụla anyị zutere, mana ụmụaka bụ ụmụaka. Tụkwasị na nke ahụ, ha onwe ha nwere ike ịdị na-ahụ maka ịchọ ihe ndị nwere ike imerụ ha ahụ, ya mere ọ dị mkpa na laptọọpụ, ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ nke gụnyere, nwere. njikwa nne na nna.
Site na njikwa ndị nne na nna, ndị nne na nna nwere ike tọọ oke, dị ka oge iji, igbochi ngwa ma ọ bụ ibe weebụ, na nke ahụ dị ezigbo mkpa mgbe anyị na-ekwu maka ụmụaka na-agagharị na ịntanetị.
Nkọwa teknụzụ nke laptọọpụ ụmụaka ga-adịkwa ntakịrị karịa karịa laptọọpụ ndị okenye, naanị n'ihi na ihe ha ga-eme ha kwesịrị ịbụ obere ihe na-achọsi ike. N'ezie, anyị aghaghị iburu n'uche na ha ga-abụ ihe ike zuru oke ịkwaga sistemụ arụmọrụ nke ahụ gụnyere laptọọpụ, ihe dị mkpa nke anyị ga-ahụkwa na isi ihe na-esote.
Ma anyị bụ́ ndị toworo eto, ihe ndị dị n’ime ya gụnyere laptọọpụ ga-ejere anyị ozi ka anyị nwee ike ime ihe dị anyị mkpa n’enweghị nhụjuanya. Ọ bụrụ na anyị na-eche na nwatakịrị ahụ ga-eme nke kacha nta, nke bụ ịgagharị na ịntanetị, jiri ngwa ụlọ ọrụ na Paint, dịka ọmụmaatụ, ha ga-achọ laptọọpụ nwere ihe nhazi. i3 ma ọ bụ dakọtara na 4GB nke RAM, na ọ dịkarịa ala. Kọmputa agaghị abụ nke kacha ọsọ n'ụwa, mana nke ahụ ezuola.
Ezi uche, ka anyị na-emefu, ka kọmputa ahụ ga-adị mma na ndị ọzọ ga-enwe ike ime obere anyị, ma ebe a, ọ ga-amasị m ịnye echiche m banyere ya: mgbe anyị na-agarịrị, dịka ọmụmaatụ, na Intel i5 ma ọ bụ ihe kwekọrọ, 8GB nke RAM na SSD disk, nke nwere ike ibuli ọnụahịa ahụ gaa n'ihu. € 600 ma ọ bụ karịa, ¿ ihe anyị nwere n'ihu anyị bụ kọmputa maka ụmụaka? Ọ bụghị ihe na-agaghị ekwe omume, ma naanị otu ụzọ ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụrụ na ha rere ya dị ka ndị dị otú ahụ (ịzụ ahịa) na imewe ahụ bụ ihe na-eguzogide ọgwụ, ma echere m na anyị ga-amarịrị na-eche ihu na laptọọpụ maka ndị okenye nke nwatakịrị ga-eji.
Mgbe anyị na-ekwu maka sistemụ arụmọrụ, ọtụtụ na-amalite site n'iche echiche Windows, ma ọ bụghị naanị ya dị. Dabere na Linux enwere narị otu narị, enwerekwa ndị dabere na BSD na MacOS Apple, mana ebe a anyị ga-elekwasị anya na abụọ n'ihi na ha bụ ndị a na-ahụkarị, malite na windo Microsoft.
Windows: Sistemụ arụmọrụ desktọpụ kacha eji arụ ọrụ n'ụwa bụ Windows, ọ ga-abụkwa na laptọọpụ anyị na-azụta maka obere anyị ga-eji sistemụ arụ ọrụ arụnyere na ndabara. Ọ dị na mbipụta dị iche iche, mana ha niile na-enye anyị ohere ịme ngwa desktọpụ nke obere anyị nwere ike iji mee ihe niile.
Chrome oS- Ezubere sistemụ desktọpụ Google iji nye ahụmịhe dị iche, a na-ejikwa ya n'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị weebụ gị, Chrome, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ngwa weebụ ma ọ bụ ngwa weebụ. Na nsụgharị ọhụrụ ya, ọ na-enwetakwa atụmatụ ndị na-eme ka ọ kwekọọ na ngwa Linux, nke a nwere ike ịmasị ụmụaka, iji usoro ọrụ dị iche iche ma mee ka ihe ndị a rụọ ọrụ.
Onwe ya, M ga-akwado otu nwere Windows, akụkụ n'ihi na ọ dị mfe ịwụnye Linux ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya na akụkụ n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ngwa dị.
Uru nke ịzụrụ nwa gị laptọọpụ
Mee oru omume
Mgbe m gara ụlọ akwụkwọ, e ji aka dee ihe niile n’akwụkwọ. Nke a abụghị ikpe ruo ogologo oge, ma echetara m oge na-achọsi ike n'oge na-adịbeghị anya ebe ha mere ka m dee akwụkwọ site n'aka iji bịanye aka na ya na ... nwere oge ọjọọ, eh? Enweghị m àgwà. Ụmụaka, na klaasị, na-aga n'ihu na-ede ihe n'aka, ma ha nwekwara ike ịrụ ụfọdụ ọrụ site na iji teknụzụ, dị ka oru omume.
Ọ bụrụ na a ga-eji aka dee ihe omume ụlọ akwụkwọ nke ụmụntakịrị anyị ga-arụ, n’ụzọ ezi uche dị na ya, ha ga-eji aka dee ha, ma ọ ga-abụ na a pụrụ inweta ozi ndị dị mkpa na ịntanetị, ihe anyị ga-akọwakwa na ya. isi ihe ozo. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na a manyeghị ha iji aka rụọ ọrụ ụlọ ha, ha nwere ike mee ha na kọmputa ma bipụta ha, nke a ga-aka mma mgbe niile karịa ibe ejiri aka dee nke nwere ntụpọ ma ọ bụ studs.
Tupu e kwuo na "ihe niile dị n'akwụkwọ", ma, ebe ọ bụ na akwụkwọ niile dị na ịntanetị, ugbu a, anyị na-ajụ ihe niile site na "San Google". Ụzọ kacha mma isi mụta bụ ịgụ na ime ihe m gụrụ, ma anyị nwere ike iji kọmputa ọ bụla mee nke ahụ. Mgbe obere nwa anyị kwesịrị ịmụta ihe ọhụrụ, nke ahụ ga-adị na ịntanetị, n'ezie.
N'aka nke ọzọ, ihe ha ga-amụtakwa na laptọọpụ bụ na-agagharị na ịntanetị, nke na-eyighị m ka ọ dịchaghị mkpa ma na-eche na ọ pụkwara ịdị ize ndụ. Mgbe anyị na-agagharị na Ịntanetị, anyị na-amụta "asụsụ", ya bụ, ihe na-amasị anyị, ihe anyị nwere ike ịhapụ, ihe mgbasa ozi, otu esi eji onye na-agụ ya lekwasị anya naanị n'ihe dị mkpa ... Mgbe ụmụaka malitere ịnyagharịa. , ha ga-amụta ihe a nile dị ka anyị ndị toworo eto mụtarala.
Ma kpachara anya: dị ka anyị kọwara na nke gara aga, ị ga-akpachara anya, na ọ bara uru ịchịkwa ntakịrị ebe ha na-akwaga, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume site n'iji ya eme ihe. njikwa nne na nna nke sistemụ arụmọrụ nke akwụkwọ ndetu.
Bido na kọmpụta
Echetere m na m malitere ịgbakọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, na MS-DOS na Windows 3.11. N’ebe ahụ, ha kụziiri anyị ihe anọ, ma mgbe m malitere ịmụta n’ezie na ọ bụ PC nwanna nwoke ji Windows 95 bịa. N’ebe ahụ, amụtara m itinye ihe omume (egwuregwu, agaghị m agha ụgha). na-agba ọsọ na mmemme egwu, tinyere ihe ndị ọzọ.
Oge anyị zụtara kọmputa maka nwatakịrị, yana sistemụ arụmọrụ desktọpụ, ọ ga-abụ mgbe ọ malitere maara kọmputa n'ezie. N'ebe ahụ ị na-ahụ ihe nchọgharị desktọpụ, ngwa ụlọ ọrụ zuru oke, ndị na-edezi ihe oyiyi, na nke ahụ bụ mmalite. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ma ọ bụ anyị na-akpọ gị òkù ka ị nwee mmasị, ị nwekwara ike ịmụta mmemme, yana ịnwale usoro ọrụ dị iche iche na ọtụtụ ngwanrọ ndị ọzọ. Ihe a niile agaghị ekwe omume na mbadamba.
Kedu afọ ọ dị mma ịzụta laptọọpụ ụmụaka?
Ọfọn, m na-abụkarị onye na-eji ọtụtụ ohere akpọrọ ihe na, dị ka ndị dị otú ahụ, anaghị m enyekarị azịza doro anya, mana nhọrọ ka onye nwere mmasị nwee ike ikpebi. N'ihi ya, ihe mbụ m ga-ekwu bụ usoro ihe ọmụmụ nke a na-ekwukarị, ma m ga-akọwa ihe ọzọ. Afọ nke ụmụaka kwesịrị ịmalite iji kọmputa dịka echiche ndị mmadụ na-echekarị bụ na 13 afọ. Ha ka bụ ụmụaka n'oge ahụ, ma ha ahapụlarị 12 na 13 bụ mgbe ha na-amalite itolite na ọmụmụ ihe na-achọsi ike karị, nke ahụ bụ afọ a tụrụ aro dịka ọtụtụ.
Ugbu a, echere m na nke a dịkwa n'aka nne na nna. M maara nke a nso ikpe nke nna na-ewebata nwa ya nwanyị na sayensị kọmputa mgbe ọ dị afọ 6. Ebumnuche ya bụ ka ọ mụta ịkwaga, na sistemụ arụmọrụ na-amata ya wee malite iji koodu egwu egwu. Nwoke a chọrọ ka m metụ Windows na Linux aka, mana nke a bụ mkpebi ya. Ọ bụ echiche ọjọọ? Ee e, ọ bụrụ na a na-esonyere ya n'ụzọ mmụta na, n'ezie, ọ dịghị achọ nnukwu ihe. Ebumnuche nke ndị enyi m, nke ahụ adịghịkwa njọ n'anya m, bụ na nwa agbọghọ ahụ na-amụta site na nwata mgbe ọ na-ekpori ndụ.
Ma, ka anyị ghara ichefu ihe m kọwaworo n’oge a, bụ́ echiche abụọ: ọtụtụ ndị na-ekwu na ihe kasị mma ga-abụ mgbe ọ dị afọ 13, ma nna maara ihe ọ na-eme pụrụ ịnwale ya ngwa ngwa.
Mbadamba ụrọ ma ọ bụ laptọọpụ maka nwatakịrị?
Iji zaa ajụjụ a, anyị kwesịrị ịkọwa ntakịrị ihe ngwaọrụ ọ bụla bụ ma ọ bụ ihe eji ya. Emebere mbadamba nkume iji rie ọdịnaya. Ogo ha na-eme ka ha zuo oke maka ikiri vidiyo YouTube (ha hụrụ nke a n'anya), igwu egwuregwu ụfọdụ, na iji ụfọdụ ngwa ịmụta. N'aka nke ọzọ, ọ gwụla ma anyị zụtara ya iche, ha enweghị keyboard, yabụ ị nweghị ike iji ha rụọ ọrụ, ma ọ bụ na ọ bụghị nke ọma. Mgbe ahụ, anyị nwere laptọọpụ, nke gụnyere keyboard na sistemụ arụmọrụ na-adịkarị ike karị, ya mere ụmụaka nwere ike ime karịa na mbadamba nkume, ọ gwụla ma ha na-achọ ngwa mmetụ.
Ya mere, m ga-ekwu na:
Tablet iji rie ọdịnaya, gwuo egwuregwu ma jiri ụfọdụ ngwa mụta, yana iji nkasi obi were ya ebe ọ bụla, gụnyere njem.
Obere Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ na-amụ, na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna na-egwu dịtụ ike utu aha, ma ugbua na PC. Ọ dịkwa mkpa ikwu na ụzọ kacha mma isi malite na kọmpụta bụ site na kọmpụta, nke a gụnyere mmemme ma ọ bụ ịnwale sistemụ arụmọrụ dị iche iche.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ịba uru » Enwere ike ibugharị maka ụmụaka